रामेछापमा ४४ किलोमिटरमात्र कालोपत्रे सडक - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
रामेछापमा ४४ किलोमिटरमात्र कालोपत्रे सडक
माघ ०६, २०७४ 373 ऊर्जा खबर/रामेछाप
देशभर निर्माण भएको करिब ६० हजार किलोमिटर सडकमध्ये १२ सय किलोमिटर रामेछाप जिल्लामा पर्छ । तर, निर्माण भएको सडकमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ४४ किलोमिटरमात्र कालोपत्र (पिच) भएको छ ।
गाउँका अधिकांश सडक प्राविधिकको परामर्शबिना राजनीतिक स्वार्थमा खनिएका कारण कालोपत्रे भएका छैनन् । यस्ता अलपत्र सडकमा अधिक सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । जथाभावी राजनीतिक दलको स्वार्थमा खनिएकाले बजेट अभाव हुँदा यस्ता सडक कालोपत्रे गर्ने प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
रामेछापका ८ स्थानीय निकाय (२ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका) मा अहिले सडक निर्माण अभियान नै सुरु भएको छ । स्थानीय तहले पनि अधिकाशं बजेट सडक निर्माणमा खर्च गरेका छन् । तर, अपेक्षाअनुसार सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रे हुन सकेको छैन ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रामेछापका अनुसार सडक निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि गुणस्तरीय पक्षमा ध्यान दिइएको छैन । मन्थली वरपर केही सडक कालोपत्रे भए पनि अधिकांश ठाउँ अलपत्र रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रामेछापका प्रमुख कृष्णलाल पियाले बताए । ‘सडक निर्माणमा होडबाजी देखिन्छ, गुणस्तर र कालोपत्रे गर्ने काम सुस्त छ,’ उनले भने ।’
हाल जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीदेखि रामेछाप, सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि दोलखाको सीमा किर्नेटारसम्म ४४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । यद्यपि, जिल्लाको ६४ वटै वडामा सडक पुगेको छ । अधिकांश सडक हिउँदमा मात्र सञ्चालन हुन्छन् ।